Tababare Zinedine Zidane oo qarka u saaran inuu isaga tago Kooxda Real Madrid dhammaadka xilli ciyaareedkan… (Maxay tahay sababtu?) – Gool FM
Tababare Zinedine Zidane oo qarka u saaran inuu isaga tago Kooxda Real Madrid dhammaadka xilli ciyaareedkan… (Maxay tahay sababtu?)
(Madrid) 10 Dis 2020. Tababare Zinedine Zidane ayaa la soo warinayaa inuu qarka u saaran yahay inuu isaga tago shaqada kooxda Real Madrid, iyadoo sababta uu u baxayana shaaca laga qaaday.
Zinedine Zidane ayaa ku dhow inuu isaga tago kooxda Real Madrid dhammaadka xilli ciyaareedkan maxaa yeelay shuruudaha naadiga uu la garay ma’ahan kuwo u socda sidii lagu ballamay.
Warsidaha Diariogol ayaa warinaya in Zidane loo sheegay in kooxdu la soo saxiixan doonto Paul Pogba, Sadio Mane iyo Eduardo Camavinga, laakiin taa beddelkeeda uu ku jaha-wareersan yahay qolka labiska, isla markaana shuruurdaas aan waxba laga soo qaadin.
Shabakadda shacbiyadda badan ee Isbaanish-ka ah ayaa sheegaysa in Zidane uu ka tagi doono garoonka Bernabeu dhammaadka xilli ciyaareedkan, taasoo qayb ka ah heshiiska labada dhinac oo macallinka reer France uu si sharci ah ku tagi karo.
Miyuu Sergio Aguero ku soo bilaaban doonaa kulanka Manchester derby? - Tababare Pep Guardiola ayaa ka jawaabaya